Wiil Soomaali ah oo Taariikh ka dhigay Midowga Yurub – XAMAR POST
Wiil Soomaali ah oo Taariikh ka dhigay Midowga Yurub
By Zakariye iiman On May 27, 2019
Maajid Maajid oo ah Soomaali marna soo noqday Duqa Magalada Sheffield ee dalka Britain ayaa loo doortay in uu ka mid noqdo Xubnaha Baarlamaanka Midowga Yurub taas oo ay soo dhaweeyeen dad isugu jira Soomaali iyo Ajnabi.
Maajid Maajid ayaa horay taariikh uga sameeyay dalka Britain,kadib markii uu diiday in Madaxweynaha Mareykanka uu soo booqdo Magalada uu Duqa ka ahaa ee Sheffield ee dalka Britain,waxaana xilligaas uu ahaa Duqa Magaalo ee ugu da’da yar dalka Britain.
Markii uu ku guuleystay doorashada Xubin ka mid ah Baarlamaanka Midowga Yurub ayuu barta uu ku leeyahay twitter-ka soo dhigay qoraal uu ugu mahad celinayo dadkii ka qeyb qaatay doorashadiisa ee suurtageliyay in uu ka mid noqdo Baarlamaanka Midowga Yurub.
Maajid ayaa Ingiriiska tagay isagoo shan sano jira ka dib markii isaga iyo qoyskiisu ay ka qaxeen magaalada Burco ee deegaanada Soomaaliland,waxaana uu ka mid yahay siyaasiyiinta aadka u neceb,isla markaana dhaleeceeya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wararkii u dambeeyay Gabar tooreey lagu dilay M/Gaalkacyo